maryan maxamud axmed
iidle added a post in a topic: 12 sharci oo ugu weyn baraha ama macalinka 21 Sep 2015
Sharciyada ay leeyihiin barayaash ama macalimiinta ayaa ka mid ah:
1.xiisada koowaad waxyar u bilow.
2.waa in uu diirada saaraa mowduuca markaas ka hadlaayo baraha.
3.waa in uu daacad u ahaadaa ardayda uu waxbaraayo.
4.waa in uu ardayda u baraa si cajiib ah wax walbo.
5.waa in uu ku tijaabiyaa arday wax uu baray.
6.mar walbo ha bilaabinqorshe ilaa standard u samaysid.
7.baraha marwalbo waa in la jaanqaadaa technologyada.
8.ahaw qof casharadiisa u qeexanyihiin.
9.ahaw qof aqoon u leh maadada uu dhigaayo.
10.caawi ardayda weydii su,aalo.
11.ahaaw qof wax xiiseynaayo wax uu dhigaayo.
12.in badan soo akhri casharka aad gudbinaysid.
iidle added a post in a topic: Waa Maxay Noocyada ganacsiga 21 Sep 2015
Marka laga hadlaayo ganacsiga wuu fara badanyahay wuuna noocyo badan yahay mana ahan hal shey in laa ganacsado,hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa noocyada ganacsiga waxa ay yihiin:
1.Ganacsiyada yar yar.
2.Ganacsi magac shirkada kale aad ku shaqeysatid. tusaale (franchise)
3.Ganacsi internet wax lagu kala iibsado (online business)
4.Ganacsi qoys ah. tusaale nin iyo xaaskiisa inay ganacsi wada abuurtaan
5.Ganacsi ku dhisan guriga.
6.In aad badeeco soo dajisid
7.In aad badeeco sii dhoofisd
iidle added a post in a topic: Waa maxay saaxiib? saaxiibka wanaagsan iyo ka xun 6 Jul 2015
Saaxibka waa qof inta badan noloshaada ku lamaanan ,saaxibka ama saaxiibtinimadu ma ahan mid ku xiran Da'da,midabka,qabiilka,iyo jinsiyada midna laakin waxaa muhiim ah in aad kula saaxiibto qof aad la saaxibeysid qof diin leh isla markaana ah qof ilaahay ku xiran ilaaliyana salaadaha waajibka ah iyo wax Alle wixii ilaahay uu faray in uu ilaaliyo kaa weeye saaxibka wanaagsan .
Hadaba aan wax ka sheegno saaxibka wanaagasan iyo saaxiibka xun
Waa kuma saaxibka wanaagsan?
Marka aan fiirino shareecadeena wanaagsan oo qiimaha badan in badan ayey ka hadashay saaaxibka wanaagsan iyo saaxibka xun Alaah SW ayaa noo cadeeyay iyo nabigeena naxariis iyo nabad gelyo korsiisa ha ahaatee.
Hadii aan ku hormaro hadalka Alaah SW wuxuu ku cadeeyay ama kaga hadlay saxibka xun suratada Alfurqaan oo kala ah aayadaha 27,28,29 saddexdaan ayadood waxay ka hadlaayaa saaxibka xun gaar ahaan marka la gaaro qiyaamada islamarkaana xiligaas shalaay iyo qoomamo aan waxba tareynin ayaa wuxuu ku cataabaayaa qofka saaxibka xun lahaa shalaaytadeydiyey qofkii hebel ahaa maxaan ula saaxibay oo saaxib maxaan uga dhigtay,oo qof fulaan oo ahaa nin wanagasan ahlu salaadka ahaa maxaan saaxiib ug dhigan waayay ama uga yeelan waayay markuu arko in uusan shalaay iyo qoomamo waxba tareynin ayuu dhahaayaa,waxaa xaqqiiqo ah in aan ka lumay xusidda alle kadib markii la ii soo diray rasul sheydaan ayaa I khiyaameeyay waa xili aan cataaw waxba tareynin sheydaankana waa cadowgaada ee cadow ka dhigta ayuu alle nagu yiri.
Dhanka kale marka uu ka hadlaayay rasuulkeena suubanaa NNKH saaxibka wanaagsan iyo saaxibka xun wuxuu tusaale usoo qaatay qof ka shaqeeya meel lagu iibiyo waxyaalaha uduga leh sida catarka,barafuunka,iyo wax alle wixii carfa dadkana jecel.
Waayo qofkaan ka shaqeeya carwo ama meel lagu iibiyo waxyaalaha uduga leh hadii aad u tagtid hadii uusan hal habo oo catar ah kusiinin ugu yaraan waxad kasoo tegaysaa ama kasoo baxaysaa meesha uu ka shaqeeyo saaxibkaa adigoo carfaayo waayo saacadaha aad la joogtay ayaa ku saamaynayso carafta.
Saaxibka xuna wuxuu ku shegay rasuulkeena naxariis iyo nabad gelyo korkiisa ha ahaatee
qofka ka shaqeeya meelaha lagu sameeyo biraha ama qofka biraha garaaca runtii qofka biraha garaaca hadii aad u tagtid inaad wax kasoo faaidid iska daayee laba mid unbaa kasoo tagaysaa in aad kasoo tagtid adigoo shaarkaada wada dab ah ama inay kaa soo urto birtii la garaacaayay,waana midka uu ku sheegay rasuulkeena saaxibka xun
iidle added a post in a topic: 5 qodob oo raga xaaskooda ku jecelyihiin 2 Jul 2015
Waxaa jirto shan qodob oo raga xaaskooda ay ku jecelyihiin hadii ay u samaysana uusan waligiis ilaabi doonin ayaan rabaa inaan idin soo gudbiyo ,runtiina hela qof nasiib leh waxayna kala yihii shantaan qodob:
2.Muwaafaqa ama daacadnimo.
Runtii waa shan qodob oo hadii ay noqdaan ama ay iska raaraadiyaan dumarka muslimiinta ah uusan ninkooda waligood ilaabi doona.
Waxaan rabaa inaan mid mid aan u dul istaagno insha alaah.
1.Diin:waa in ay tahay qof diin leh waayo nabigeena NNKH ayaa yiri marka uu ka hadlaayay guurka ayaa sheegay in naagaha lagu guursado 4qodob sida diinteeda quruxdeeda ,dhaqaale,nasab,intaas markuu sheegay nabaiga naxariis iyo nabad gelyo korkiisa ha ahaatee ayaa yiri kudadaala mida diinta leh si aad u guuleysato.
Sidaa daraadeed waxaa muhiim ah in diirada la saaro sidii lagu heli lahaa mid diin leh.
2.Muwaafaqa ama raaliyad:waa in ay tahay mid muwaafaqa ah ama raaliyad ah oo ninkeeda amarkiisa qaadata aanan ka aheyn wixii alle SW wax alle wuxuu raali ka yahay.
3.Samir:waa in ay tahay qof samir badan mushkilad kasta oo soo wajahda inta ay la nooshahay
Dhibaatadaas waa in ay ku samirtaa tusaale sida ninkeeda hadii ay soo wajahdo mushkilada dhaqaale ileen aduunyadaaan marba waa xaalad .
Hadii ay xaalada kasta ay kula samirto ninkeeda iyo caruurteeda xaaska noocaas ah waligeed ma ilaabi doona ninkeeda.
4.Daryeel:marka laga hadlaayo daryeelka waxaa weeye waa daryeelka khaaska ah oo dhan walba ka daryeesho ninkeeda hadii ay ahaan laheed dharka uu xiranaayo oo uu ku labisanaayo inay daryeesho nadaafadiisa ,sidoo kale daryeelka waxaa ka mid ah dhanka cuntadiisa ,gogoshiisa,ninka qaraabadiisa iyo daryeelka caruurta waxaas oo dhan ayaa laga rabaa in ay samayso naagta ama daryeesho,hadii ay sidaa sameyso naagta ninkeeda waligiis ma ilaabi doona.
5.Dareen.marka laga hadlaayo waa uu fara badan yahay waxaana ka mid ah waa in ay ilaalisaa ninkeeda dareenkiisa dhanka reerkiisa ama goyskiisa.
iidle added a post in a topic: 5 Qodob oo Dumarku Ku Jecelyihiin ragooda 2 Jul 2015
5 Qodob oo Dumarku Ku Jecelyihiin ragooda
3.Hogaan toosan ama nin Qawaama leh.
Waa shan qodob oo ugu muhiimsan hadii aad ku sifowdo xaaskaada waligeed kuma iloobi doonta.
Hadaba mid mid aan u sharaxno.
1.Diin:qofka waa in uu leeyahay diin isla markaana ku dhaqmaaya diintiisa xaniifka ah wax alle wixii ilaahay faray samaynaayo wax alle wixii alle ka reebayna ka haray sidoo kale uu yahay qof aad ugu dadaala dhaacada alle SW sida salaada ,soonka ,sadaqada haduu ilaahay maalsiiyay waa mida ugu muhiimsan waaye qofka inuu leeyahay diinta islaamka.
2.Akhlaaq wanaagsan:qofka waa in uu leehay akhlaaq wanaagsan akhlaaqdaas oo aad la wadaagayso xaaskaada ,waayo waxaa jirto raga qaar gurigooda markay tagaan ula dhaqma xasaskooda dabeecada qalafsan oo aanan macquul aheyn,
taasi ma ahan mid diini ah waayo xaaskaada xaq badan bay kuugu leedahay.
3.Hogaan toosan:waa in uu yahay qof hogaan fiican leh ama qawaama leh sida alaah SW ku yiri suurada Al nisaa ragga ayaa isla leh talada naagaha.
Sida la ogyahya haweeneydaada iyada nafsad ahaanteeda ma jecla in uu noqda ninkeeda haye raac ama wixii loo sheega in uu isla markiiba go,aan iska qaata,sidoo kale naaguhu waxay jecelyihiin in uu noqdo ninkeeda qof miisaan ku leh bulshada dhexdeeda.
4.Deeqsinimo:waa in uu yhay qof deeqsi ah oo gacan furan,uusan noqon qof bakhiil ah islamarkaana wax ale waxay markaas xaaskaada kaaga baaxata kaa heli karto markaas hadii aad awoodid oo aadan ka xagranin.
Raga qaar ayaa ah kuwa ka daba qaata xaskooda book iyo qalin ( micnaha la xisaabtan) islamarkaana la sameeya xisaabtan fara badan sida shey hebel imisa ayaad kusoo iibisay waxay soo iibisa oo dhan mid mid u weydiiya ,naaguhuna sidaa ma jecla.
5.Naxariis:waa in uu yahay qof naxariis badan u naxariista xaaskiisa gaar ahaan xiliyada uurka ay leedahay iyo marka ay xanuunsantahay waa xiliga ay aad ugu baahantahay in aad u naxariisatid oo aad u sheekeysid isla markaana aad weydiisid waxyaabaha ay danaynayso ama ay jeceshahay .
Hadii aad u samaysid ama aad ku sifowdo 5taan qodob way adagtahay in si sahlan ugu ilowdo xaaskaada inaad iskuu dhacdaan iskaba daayee.
iidle added a post in a topic: Sidee loo maamulaa kheeyraadka aadanah? 17 Jun 2015
Sidaan la socono wax walbo waxay u baahanyihiin in la maareeyo ama la maamulo hadii la wayana maamul waxaa meesha ka baxaayo hadafkii uu lahaa ururkaa ama shirkadaas.
Sidaas daraadeed waxan wax ka sheegeynaa sida loo maamulo kheeraadka aadanaha sidoo kale
Waa urur kasta oo shaqeeya , waa in ay lahaadaan qorshe dhaqaale oo adag kaas ah lacag,qalab iyo mishiino.
Kheyraadka ahaantooda aanu u buuxin ahdaafta ururka ah , ay u baahan yihiin in la soo hanto , wada shaqayn iyo in laga faaideysto kheeraadka aadanaha.
Si loo maareeyo kheeraadka aadanaha ayaa u soo muuqday shaqo weyn ee organisations.Human Resource Management waa shaqo hay'adeed oo arimahaasi la tacaala la xiriira dadka sida magdhow , qorista , maamulka waxqabadka , horumarinta ururka , ammaanka , faya-dhowrka , faa'iidooyinka , shaqaale dhiirogelin , isgaarsiinta , maamulka , iyo tababar .
Anshaxa maamulka ee qorista iyo horumarinta shaqaalaha si ay u noqdaan urur tayo leh .
Maamulka ilaha dhaqaalaha waxaa ka mid ah:
1.qorsheynta shaqaalaha baahida , iyo qorista.
2.xulashada dadka saxda ah ee shaqada ,
3.wacyi gelin iyo tababar ,
4.go'aaminta iyo maaraynta mushaar ,
5.faa'iidooyin iyo dhiirigelin ,
6.qiimaynta howl qabadka ,
7.xalinta khilaafaadka ,
8. la xiriira dhammaan shaqaalaha ee heer walba ay taaganyihiin.
9. Joogtaynta wacyiga iyo waafaqsanaanta sharciyada shaqaalaha deegaanka , gobolka iyo dawladda dhexe .
iidle added a post in a topic: Sidee ku noqon kartaa shaqaale wanaagsan? 15 Jun 2015
In la ahaado ama la noqdo shaqaale wanaagsan isla markaana ka keeno goobta uu ka shaqeynaayo ayaa waxay ka mid tahay la socodka maaciisha kala duwan ee shirkada uu markaas ka shaqeynaayo ama waaxda uu qaabilsanyah shaqaalahaas.
Hadaba hadii aad shaqaale tahay waxaa muhiim ah inaad noqotid shaqaale wanaagsan waayo qof ka shaqaalaha ah qudhiisa waxay u tahay sharaf weyn.
Sidaa daraadeed waxaan idin soo gudbinaynaa 20 qodob oo ka mid ah sida aad ku noqon laheed shaqaale wanaagsan waxayna kala yihiin sidaan soo socota:
1.In aad wanaajiso dhaqanka xirfadaada.
2.Baro inaad qaadatid hadii laguu soo jeediyo dhaleeceen adiga ku quseysa.
3. Baro in aad sameyso ama aad qabatid shaqada , si fiican u qabo .
4.Waa in aad xiriir wanaagsan la yeelataa dadka hay'adiina madaxa ka ah.
5. Marka aad fursad heshid baro xirfad cusub ,ama in aad raadisid tababaro , ama qaado koorso waxbarasho.
6. Yeelo rikoor shaqo nadiif ah wax qabad leh.
7.Waqtiga shaqada waa in aad u ilaalisaa.
8.Weydii kormeeraha waxa laga filayo natiijada tahay.
9.Noqo qof qeeb ka ah xalka shirkada ama ururka aad ka shaqaysid.
10.Cagahaada ama kabahaaga dhulka haku jii jiidin.
11.Aamuusnaanta badi inta shaqada lagu jiro ha isaga hadlin maalaayacni.
12.Marwalbo noqo qof wax soo saar leh.
13.Waa in aad xirataa dhar ku haboon goobta shaqada.
14.Waa in aad kor u qaadaa shaqadaada adigoo isku kalsoon.
15. Iskaa wax u qabso ama firfircooni mashaariicda si aad u samaysid shaqada .
16.Haku beer dareynin wagtigaada badan inta shaqada ku jirtid telefoonada gaarka kuu ah.
17. Isticmaal 15-20 daqiiqo ee ugu danbeysay ee shaqada .
18. waa in uu aad u yaraadaa fasaxa aad qaadanaysid.
19.Hogaanka maamulkaada waa furaha shaqada.
20. Noqo inaad mar walba tiraahdo mahadsanid mar kasta Tababaraha ama shaqaalaha wada qabto wax wanaagsan in aad , waxaa iyaga mar walba ku dhiiri doonaa inay wax badan ka wanaagsan .
iidle added a post in a topic: Sidee shaqo lagu heli karaa? 13 Jun 2015
In shaqo la helo waxay ku dhisantahay shakhsiga hormarkiisa wallow mararka qaar iska dhacdo shaqo la,aan ama inuu ilaahay kaga dhigo imtixaan adiga laguugu imtixaanayo,laakiin hadana waxaa nala faray inaan dadaalno ilaahay kaashano maadama aan nahay dad muslim ah. Sidoo kale shaqadana iskama timaado ee waxay ku xirantahay inaad raadisid aadna ku raadisid dhariiqa saxda ah qofkana waxaa muhiim ah wuxuu bartay inuu ku shaqeesto,waayo waxaadan aqoonteeda laheen inaad kusii shaqeysato way adagtahay. Hadaba shaqada waxay u baahantahay in la raadiyo ama la baadi goobo ileen soomaalida horay ayaa waxay u tiri xaglo laaban xoolo kuma yimaadaanee, Hoos waxaa ku xusan 10 Qodob hadii aad sameeyso shaqo si fudud ku heli karto:
1.in aad hormariso farsamada ama waxa aad baratay ama aad rabtid inaad ku shaqaysatid.
2.in aad si fiican isku diyaarisid wareysiga la xiriira shaqada aad doonaysid.
3.Samey liiska xirfadaha la xiriira shaqada aad jeceshahay si ay u bartaan shirkada aad shaqada ka doonaysid.
4.Fakarka macquulka ah iyo macluumaadka ama aqoontaada meesha ay gaarsiisantahay u gudbi shirkada .
5.inuu awood u leeyahay isticmaalka aalada technologyada sida computerka qeebihiisa kala duwan.
6.waa inuu awood u leeyahay xiriir wax ku ool ah oo ku aadan shirkada aad shaqada ka doonaysid.
7.waa inuu diyaar u noqda wareysi hab dhaqan leh oo asluubaysan.
8.waa inuu baaritaan ku sameeyaa shirkadaha wadanka ka jira.
9.waa inuu sameeyaa xiriir dhanka shirkadaha.
10.waa in aad ula xiriirtaa si akhlaaq iyo asluub ku dheehan ninka madax ka ah shaqaaleysiinta shirkada.
iidle added a post in a topic: Waa maxay ganacsi? 10 Jun 2015
Waa urur ama nidaam dhaqaale meesha alaabta iyo adeegyada la isku waydaarsado, midba , mid kale ama lacag lays dhaafsado.
Ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay nooc ka mid ah maal gashiga iyo macaamiil ku filan in kuwaasoo ay joogteynkaraan ama wax iibsan karaan si joogta ah si uu ugu caddeeyo faa'iido.
Ganacsiyada waa wax gaar ah loo leeyan karo , ama faa'iido doon ama dawladdu leedahay. Tusaale ka mid ah shirkadaha ganacsi waa Pepsi Co, halka ganacsi cuntada hooyada iyo pop waa ganacsi khaas ah.
iidle added a post in a topic: 10 ka Mabaadi ee Hagaysa maareenta mashruuca 8 Jun 2015
Mar hadii aad samaynaysid mashaariic waxa jiro waxyaabo muhiim ah isla markaana lagama maarmaar ah sidaa daraadeed waxaan soo qaadanaynaa 10 ka mid ah mabaaii,da hagaysa maareenta masharuuca.
Tani waa sababta ururada doonayaan in ay abuuraan wax soo saar oo qofkasta u oggolaanaya ku lug yeelashada tababarayaasha mashruuca , daneeyayaasha, iyo xafiiska maamulka mashruuca oo loo soo gaabiyo (PMO) oyna wax ku ool loo wada shaqeeyo.
Taasi ma aha in la yiraahdo gooldhalinta RACI jira iyo xeerarka kordheen (xubnaha CEB PMO) aanay waxtar lahayn, laakiin aan tiro mabaa'dii ah caadi dadka u hogaansanaanta hanaanka inta badan bedel ku samaynta go'aanka saxda ah.
In ruuxa , sida qayb ka mid ah PMO daraasad cusub ee Box ah, waxaan abuurnay ah 10 ka mabaadii,da maamulka mashruuca mabaadiida ugu fiican ee aan arkay PMOs sanadkii la soo dhaafay.
Waxayna kala yihiin 10 kaas mabaadii sida soo socota:
1.Qiimaha ganacsiga : Hadafka wada dhammaaday shuqulkii mashruuca waa in la samatabbixiyo qiimaha ganacsiga.
2.Qiyaas: shaqaalaha mashruuca awood inaad gaarsiiso go'aamo ku saabsan codsiga habka iyo ganacsiga inta u dhaxaysa baaxadda, jadwalka, iyo miisaaniyadda marka loo baahdo.
3.Hal abuurka aragtida: Tixgeli saamaynta go'aamada mashruuca qiimaha ganacsi, ma ahan oo keliya odoroso ama ujeedooyinka PMO.
4.Xisaabtanka wadaag:Samee ballan qaadyada aragtida la wadaago ee natiijooyinka mashruuca.
5.Iskaashi daneeyayaasha: In la sameeyo xiriir shaqsi ah la daneeyayaasha ku saleysan hoggaanka, kalsoonida, iyo kalsoonida.
6.Qiimaha Businesska : Hadafka wada dhammaaday shuqulkii mashruuca waa in la samatabbixiyo qiimaha ganacsiga.
7.Qiyaas, shaqaalaha mashruuca awood inaad gaadhid go'aamo ku saabsan codsiga habka iyo ganacsiga-offs inta u dhaxaysa baaxadda, jadwalka, iyo miisaaniyadda marka loo baahdo.
8.Hal abuur aragti: Tixgeli saamaynta go'aamada mashruuca qiimaha ganacsi, ma ahan oo keliya odoroso ama ujeedooyinka PMO.
9.Xisaabtanka wadaag: Samee ballan qaadyada aragtida la wadaago ee natiijooyinka mashruuca.
10.Iskaashi daneeyayaasha: In la sameeyo xiriir shaqsi ah la daneeyayaasha ku saleysan hoggaanka, kalsoonida, iyo kalsoonida.
hay'adaha maareynta mashaariicda ugu guulaha badan ma keliya boorka mabaadi'da sannad kasta marka ay abuurayaan ay qorshe sanadlaha ah.
Waxay iyaga la socoshada ciidamada jaan go'an ee maalin ka maalin oo shaqo ah maamulka mashruuca si mabaadii'da u noqota.
dhanka loogu talagalay isdhexgalka u dhaxeeya shaqaalaha mashruuca maamulka iyo daneeyayaasha, iyo sida ay PMOs iyo tababarayaasha mashruuca go'aannada ku saabsan qoondaynta khayraadka iyo horumarinta xirfadaha.
Si dhab ahaan iyaga ku iman nool, waxay ku dhajinayaan gidaarka qolka kasta kulanka kooxda, iyaga oo ka mid ah sare ee ajandaha shirarka mashruuca oo dhan, oo iyaga gacanta PM cusub kasta ee maalinta ugu horeysa shaqada.
iidle added a post in a topic: Waa maxay maareenta mashruuca? 7 Jun 2015
Mashruuc Waa hami ku meel gaar ah ku dadaaleen in la abuuro shaqooyiin gaar ah wax soo saarka, adeeg ama natiijada.
Mashruuc waa wax ku meel gaar ah isla markaana uu leeyahay bilow wagti la qeexay iyo dhammaadka wakhtiga, oo sidaas daraaddeed qeexay baaxadda iyo khayraadka.
Markaasuu mashruuc waa mid gaar ah in aanay howlgal caadiga ah, laakiin loo dajiyo howlo gaar ah hawlaha loogu tala galay in aad hadafka aad donaysid keli.
Sidaas daraadeed kooxda mashruuc inta badan waxaa ka mid ah dadka aan sida caadiga ah u wada shaqeeyaan , mararka qaarkood oo ururro kala duwan iyo guud ahaan badan geographies.
Horumarinta ee software ee habka ganacsi wanaagsan, dhismaha dhismaha ama buundooyiin, dadaalka gargaarka ka dib markii masiibo dabiici ah, ballaarinta iibka suuqa ee juqraafi cusub oo dhan waa mashruuc.
Oo dadkii oo dhammi waa in qibradiisa la maareeyaan in la hirgaliyo oo mar aan miisaaniyadda natiijada, barashada iyo is dhexgalka in ururada u baahan tahay.
Maamulka mashruuca , ka dibna, waa codsi aqoonta, xirfadaha, qalabka, farsamooyinka iyo in la doroso hawlaha inay buuxiyaan shuruudaha mashruuca.
Waxaa mar walba lagu dhaqmo aan rasmi ahayn, laakiin waxay bilaabeen inay soo baxaan sida xirfad kala duwan ee bartamihii qarnigii 20 inshuuranskiisa ee A Guide u Body Maamulka Mashruuca ee wax og waxa ay tilmaamaysaa xubno ka ay soo noq noqda:
Geeddi socodka maamulka Mashruuca dhicin shan kooxood:
4.La socodka iyo Xakameynta
iidle added a post in a topic: Qeybinta awoodda maamulka 2 Jun 2015
Waa maxay himiladeenna ?
Waaxda Hay'adda Maamulka meelmarisaa fulisaa sharciyada gudaha iyo heshiisyada caalamiga ah si kor loogu qaado dhawrista muddada dheer ee khayraadka kalluun iyo duur joogta ee caalamka . Iyada oo laga jawaabayo sii kordhaysa cadaadis caalami ah oo ganacsiga duur joogta iyo khasaaro noocyada adduunka oo dhan xafiiska quduus dadaalka ay ugu xafidi noocyada ugu khatarta ka ganacsiga iyo hirgelinta siyaasadda in ay leeyihiin saamayn ballaadhan on ilaalinta guud .
Sidee baannu u nidaamsan yihiin? Meelmarinta waa mid ka mid ah saddexda qaybood Barnaamijka Arimaha Caalamiga ah ee Maraykanka kaluunka iyo Duur joogta Adeegga , taas oo ah wakaalad gudahood Waaxda Arrimaha Gudaha.
Waa maxay shaqada uu qabanaayo?
Iskaashiga caalamiga ah ay muhiim u tahay ilaalinta badbaadada ee xayawaanka duurjoogta ah oo badan iyo dhirta ganacsiga . Ganacsiga Caalamiga ah ee nooc oo go'aya iyo Dhirta waxay bixisaa qaab waayo, quruumahaas oo ay u wada shaqeeyaan si looga hortago faahfaahin dheeraad oo dadka duurjoogta . Inta badan quruumaha aqoonsan UN hadda jira xisbigiisa si ay muwaadininta , tirada guud ee saxiixayaasha hadda taagan ee 180 wadan . Wadanka kastaa wuxuu leeyahay awood maamul ah inay u taliyaan fulinta muwaadiniinta. Maraykanka gudihiisa , doorkan waa la fuliyay.
Qeybaha Hoose DMA oo ah Laanta Oggolaanshaha iyo Duur-joogta Ganacsiga iyo Ilaalinta Laanta wada shaqeeyaan si ay u gaadho soo socda:
1.hirgalinta barnaamijka ogolaanshaha caalamiga ahganacsiga Shaashad
2.in ay la shaqeeyaan saraakiisha kormeerka iyo fulintaLa xiriiraan arrimaha dadka kale.
3.in ay la shaqeeyaan hay'adaha wadanka iyo Federaalkawaxay bixiyaan kaalmo farsamo si ay u helaan kaaalmo kalewakiil ah Dowladaha Xubinta.
Laanta Oggolaanshaha isticmaalaa ogolaanshaha sida qalab adeeg oo caawinaya la ilaaliyo jiritaanka duur Xageeda, oo ay isticmaalaan dadka, maanta iyo mustaqbalka labadaba. Iyada oo loo marayo hanaanka saamaxdo xog qiimo leh la ururiyey, la wadaago, iyo sida loo isticmaalo si ay ula socdaan oo maamulaan ganacsiga xoolaha iyo dhirta. Idmo laan geedi socodka hoos (duur-joogta ee waxyeelada), Xeerka raadka Ilaalinta Badda, Wild Bird Ilaalinta Sharciga, iyo go'aya Act. In Wajiga culayska sii kordhay iyo kororka dalabka saamaxo, laanta sii wadaan in ay raadiyaan habab cusub oo loo farsameeyo saamaxo, isagoo adkaynaya la wacyi galiyo daneeyayaasha iyo isticmaalka technology cusub. Ganacsiga iyo Ilaalinta Duur-joogta Laanta wuxuu horumariyaa siyaasado wax ku ool ah iyo xeerarka ay u fuliyaan muwaadiniinta ku turjumeysa qaraarada iyo go'aamada, caawiye socodka ganacsiga ee CITES soo xareeyaan, isku duwaha hay'adaha kale ee muwaadinka hawlaha iyo fulinta, waxay u adeegtaa sida dadweynaha hoose xiriir, oo waxay bixisaa Wafdiga shaqada saadka iyo diyaarinta ah ugu CITES kulan. Laanta Tani waxay sidoo kale fulisaa qodobada sharciyada kale ee duur-joogta US ganacsiga sida Ilaalinta Sharcig.
iidle added a post in a topic: Maamulka Suuq fududeeya hawlaha iyo shaqooyinka oo ay ku lug leeyihiin in qaybinta badeecadaha iyo adeegyada. 30 May 2015
Sida laga soo xigtay Philip Kotler, "maamulka Suuq waa falanqaynta, qorshaynta, fulinta iyo gacan ku haynta barnaamijyo loogu talagalay in lagu soo bandhigo kaas oo ku saabsan is dhaafsi la doonayo in suuqyada bartilmaameed u ah ujeedada lagu gaarayo ujeedooyinka ururka.
Waxaa ku tiirsan oo naqshadiisa ururada bixiya marka la eego suuqyada bartilmaameedka u baahan yahay iyo waxay doonayeen iyo isticmaalka adeegyo wax ku ool ah, isgaarsiinta iyo qaybinta si loogu wargeliyo, ku dhiiri gelin iyo qabashada suuqa.
Maamulka Suuq waxa ay danaynaysaa cuskisay ka soo barnaamij la hubo, ka dib markii si taxadar leh falanqaynta illaalinta iyo xaaladaha suuqa iyo kama dambaysta ah ee qorshaha ay u gaadho ahdaafta ururka.
Qorshaha iibka si ay u sii weyn oo nasasho ah ilaa xad shuruudaha iyo ujeeddooyinka macaamiisha ee suuqa.
Si loo gaaro yoolkaas, urur uu leeyahay in uu bixiyo istiraatiijiyad kor u qaadida advertising ama xayeysiiska iyo iibinta wax ku ool ah, qaybinta iyo macaamiisha ee kobcinaya iyada oo loo marayo adeegyada ugu fiican.
Isku soo duuboo, maamulka suuq lagu qeexi karaa habka maareynta suuqa
Barnaamijyada dhammaystirayo hadafka iyo ujeedooyinka ururka.
Waxa ay ku lug leeyihiin qorshaynta, fulinta iyo la socodka ee barnaamijyada suuq ama ololah suuqa.
Muhiimada Maamulka Suuq
Maamulka Suuq helay muhiimadda ay leedahay in ay la kulmaan tartan kordhaya iyo baahida loo qabo habab hagaajinta qaybinta si loo yareeyo kharashka iyo faa'iidada si loo kordhiyo.
Maanta maamulka Suuq waa shaqada ugu muhiimsan ee ganacsiga.
Kuwa soo socda waa qodobbada kale ee muujinaya muhiimada maamulka suuqa:
I) Hordhac ah waxyaabaha cusub ee suuqa.
(ii) Kordhinta wax soo saarka ee alaabta ee hadda jira.
(iii) Yaraynta qiimaha iibka iyo qaybinta.
(iv) Suuqa dhoofinta.
(V) Horumarinta ee habka isgaarsiinta iyo hababka gaadiidka gudaha iyo dibadda dalka.
(Vi),Dakhliga iyo baahida loo qabo alaabo badan ay macaamiisha u baahan.
iidle added a post in a topic: MABAADII'DA MAAMULKA 27 May 2015
Marka laga hadlaayo mabaadiida maamulka way far badanyihiin waxaan kasoo qaadanaynaa qaar ka mid ah.
Mabaadii'da Managementiga ama maamulka jira tilmaamo ah ee go'aanada iyo tallaabooyinka ah tababarayaasha.
Waxa ay ku soo minguuriyey iyada oo dhawrid iyo falanqaynta dhacdooyinka wajahay ku dhaqanka dhabta ah.
waxaa jira afar iyo toban 'mabaadi'da maamulka laakin waxaan hada xusi doonaa qaar ka mid ah maamulka.
maamulka Waxaa loo isticmaali karaa in la bilaabo gargaarto habka isbedelka, urur, go'aan qaadashada, maaraynta xirfada iyo aragtida guud ee shaqada maamulka.
Qeebinta shaqooyiinka afka qalaad lagu yiraahdo (Division Work)
Takhasuska ah ee shaqaalaha sida ay xirfadaha ee qofka, abuurista horumarka shakhsiga ah iyo xirfad gaar ah gudahood xoog ku hawshooda sidaas daraaddeed kordhaya wax soo saarka, keenaysaa in takhasuska taas oo kordhinaysa tayada shaqo ee shaqada.
sida qayb yar oo ka mid ah shaqada, shaqaalaha dardar iyo saxsanaanta qaab kordhaaya.
Mabda 'waa mid ku habboon labada farsamo iyo sidoo kale shaqada macalin,. taas waxaa lagu sameyn karaa waxtar leh kiiska mashruuca ee aad u shaqaysaa.
Qorshaynta waa in ay go'aan ka gaarto waxa ay sameeyaan ka hor
Maamulka iyo masuuliyada: oo afka qalaad lagu yiraahdo( Authority and Responsibility)
Arrinta ah amarrada ku xiga masuuliyada cawaaqib ay. Hay'adda waxay ka dhigan tahay xaq ah ka xoog badan ah in la siiyo kor loogu qaado si ay u kacaan, oo mas'uuliyadda ka dhigan tahay waajib-qabadka. Mabda '
Tani waxay soo jeedinaysaa in uu jiro sinnaanta u dhexeeya awoodda iyo masuuliyadda. Waxay yihiin wada-jirin oo wada tagaan, oo waa labada dhinac ee hal shilin. iyo amarka waa in ay munaasib leh mas'uuliyadda
Edbinta,ama Anshaxa oo afka qalaad lagu yiraahdo( Discipline)
Anshaxa loola jeedaa xagga addeecidda, dhaqanka habboon in la xiriira kuwa kale, ixtiraam ah oo amar, iwm Waxaa muhiim u ah hawlaha siman shaqada oo dhan
Tani waxay sidoo kale caawin doonaan qaabaynta dhaqanka gudaha organization.discipline yahay hawlaha lagama maarmaan ah shirkadaha oo dhan.
Midnimada Amarada:oo afka qalaad lagu yiraahdo( Unity of Command)
Tani mabda'a dhigaya in tooska kasta waa in ay helaan amarrada iyo la xisaabtamaan hal oo kaliya ka xoogbadan.
Haddii qof shaqaale ah uu helo amar ka badan hal ka xoogbadan, waxay u badan tahay in la abuuro jahwareer ama conflict.Unity of Command sidoo kale waxay sahlaysaa in la hagaajin mas'uuliyadda iyo awood u dhiganta mas'uuliyadda.
Midnimada Toos: oo afka qalaadka lagu yiraahdo(Unity of Direction)
Dhamaan kuwa ka shaqeeya qeeb la mid ah hawlaha waa inay fahmaan ujeeddooyin isku mid. Dhamaan hawlaha la xidhiidha in la keenaa in la hoos keeno hal group, waa inuu jiraa qorshe ka mid ah la taliyaal dhanka tababarka ah.
Waxaa doonayaa in lagu hubiyo midnimada tallaabo, oo diiradda lagu saaro ee dadaalka iyo isku isuduwidda xoog ah.
Inuu joogteeyo shakhsiga wax uu xiiseeyo, oo afka qalaad lagu yiraahdo(Subordination of Individual Interest)
Maamulka waa in uu leexan karo dhanka tixgelinta gaarka ah iyo ujeedooyinka shirkadda u dagsan. Sidaa darteed danaha hadafka ee ururka ama shirkada waa inuu ka hor mariyo danaha gaarka ah ee shakhsiyaadka
Abaal-marinnada oo afka qalaad lagu yiraahdo ( Remuneration)
Shaqaalaha waa in lagu bixiyaa is ku filnaan maadaama ay tani ay tahay sidii niyada shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa si ay shaqaalaha u xoojiyaan wax soo saarka shirkada sidaas daraadeed ayaa loo sameeyaa
La dhaqanka shaqaalaha iyo qaababka mushahar bixinta waa in si caddaalad ah, oo macquul ah loo siiyaa waayo shaqaalaha isku mid ma ahan isku abaal marina ma ahan.
waxaa la siiyaa shaqaalaha sida ay awooda iyo wax soo saarka. Ujeedada ugu weyn ee urur waa si loo kordhiyo Xoolo iyo faa'iido soo taabtay .
Taas aawadeed, ururka ayaa bixiyay, mushahar, oo ay ka faa'iideysan si ay shaqaalaha si sax ah iyo si cilmiyeysan si hufnaan ururka la hubin karo.
Xeerdhexe aqoonta: oo afka qalaad lagu yiraahdo(The Degree of Centralization)
Chain Scalar loola jeedaa silsiladda Madaxdannadii laga bilaabo maamulka sare in ay ku darajo wayn ugu hooseeya.
Mabda'a soo jeedinaya in ay jirto in line cad oo amar ka soo kor ilaa hoos xiriirinaya dhamaan tababarayaasha ee heer walba.
Waxaa loo arkaa silsiladda amarka. Waxa ay ku lagu fikradda loo yaqaan "isagga oo burcad" iyadoo la isticmaalayo oo tooska ah la xiriiri kartaa ka xoogbadan, ama uu ka xoogbadan, haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah, kibra madaxda ee control.
Si kastaba ha ahaatee Madaxdannadii degdeg ah waa in la wargeliyo oo ku saabsan arrinta.
iidle added a post in a topic: waa maxay islaam? 25 May 2015
islaam waxaa la yiraahdaa in laysku dhiibo ilaahay isla markaana loo hogaansanaado dhaacada alle iyo in laga fogaado shirkiga ama in cibaadada alle qofkale la,la wadaajiyo sida alle subxaanahu watacaalaa ku yiri aayada 112 ee Suuratul baqara aayadaas oo micneheedu yahay ruuxii isku dhiiba ama u hogaansanaada asigoo wanaagsan wuxuu ale aktiisa ku leeyahay ajar cabsi iyo murugo ma ahaanin dushiisa